पार्लर नगएरै अनुहार च’म्काउने यस्ता छन् ११ घरेलु उपाय, पाउनुहुनेछ यस्तो नतिजा – Gandaki Chhadke
पार्लर नगएरै अनुहार च’म्काउने यस्ता छन् ११ घरेलु उपाय, पाउनुहुनेछ यस्तो नतिजा
By गण्डकी छड्के Last updated Nov 21, 2020
एजेन्सी , अनुहार चम्काउन सौ’न्दर्य प्र’शाधनमा मानिसहरु हजारौं खर्च गर्छन्। व्युटी पार्लर धाउँछन् । तर कतिपय यस्ता सामाग्रीले कु’रुप बनाएका थुप्रै उदाहरण पनि छन्। मापदण्ड भन्दा बढी के’मिकल राखिएका सामाग्रीले रो’गको शि’कार पनि बनाएका छन् । तर सा’इडइफेक्ट नहुने र घरमै सहजै पाइने तरिका प्रति भने सौन्दर्यका पा’रखीहरुको ध्यान गएको पाइदैन । केही यस्ता घ’रेलु तरिका छन् जसले अनुहार च’म्काउन मद्धत गर्छ। १) दुई चम्चा बे’सनमा आधा चम्चा बेसार मिलाउने। त्यसलाई १० थोपा गुलाबजल र कागतीको र’सले ले’दो बनाउने।
सो ले’दोमा काचो दूध घोलेर पातलो ले’प बनाउने र अनुहारमा लगाउने। करीब २० मिनेटपछि अनुहार प’खाल्ने। हप्तामा एकपटक यो तरिका अपनाउँदा अनुहारमा च’मक आउँछ। २) डा’र्कसर्कल हटाउन आँखाको वरिपरी काँ’चो आलुको टुक्राले हल्का मसाज गर्ने।३) एक चम्चा मह हातमा लिएर अनुहारमा लगाउने। यसमा ४/५ थोपा कागतीको रस मिलाउन सकिन्छ। १५ मिनेटमा अनुहार पखाल्दा च’मक आउँछ। ४) अनुहारमा चाया पनि आएको छ भने काक्रोको रसले म’साज गर्दा चाया कम हुन्छ। ५) निमको पातलाई पि’सेर लेदो बनाएर लगाउदा छालाको रो’ग प्र’तिरोध क्ष’मता बढाउँछ। यसले ड’न्डिफोर ह’टाउन पनि मद्धत गर्छ।
६) पाकेको केरा मु’छेर अनुहारमा लगाउँदा चा’उरीपन ह’टाउँछ र छालालाई क’सिलो बनाउँछ। ७) काँचो दूधले अनुहार मालिस गर्दा मरेको छाला ह’टाउँछ। ८) काक्रोको रसमा बेसार मिलाएर अनुहारमा लगाउँदा च’मक आउँछ। ९) अनुहारमा घिउकुमारीको रसले मा’लिस गर्दा अनुहारमा चमक आउँछ र चा’उरीपन पनि ह’राउँछ। १०) सुन्तलाको बोक्रलाई घाममा सु’काएर पि’सेको धुलोमा कागतीको रस मिसाएर लेप बनाउने। यसलाई फे’सवासको रुपमा प्रयोग गर्ने। ११) फि’टकिरीको प्रयोग हामी निम्न स’मस्यामा गर्न सक्छौः अनुहार तथा शरीरको कुनै पनि भागमा छालामा देखा परेका दा’गधब्बा ह’टाउनको लागि फि’टकिरीको प्रयोग गर्न सक्छौ।
त्यसको लागि दाग भएको ठाउँमा फि’टकिरीले नियमित म’साज गर्नुपर्छ । केही समय म’साज गरेपछि चिसो पानीले प’खाल्नुस् तपाईको छालामा रहेको दा’ग विस्तारै ह’राउँदै जान्छ । त्यस्तै, यदि तपाईको शरीरमा चि’लाउने, ग’न्हाउने जस्ता स’मस्या आएका छन् भने फि’टकिरीले नियमित नु’हाउनुपर्छ । यसले पसिनाको ग’न्ध कम गर्न मद्दत गर्छ
कपालमा चायाँ ल’ठ्ठिएर दि’क्क हुनुभएको छ ? छु’टकारा पाउन यी घरेलु उपायहरु अपनाउनुहोस् !
मंसिर महिनाको मासिक राशिफल, यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य
अब पार्लर धाउनु पर्दैन, घरमै बसेर यसरी चम्काउनुहोस् अनुहार
यी ५ राशिका मानिस हुन्छन् निकै रचनात्मक !
बुधको गोचरले बन्दैछ यस्तो महायोग, यी राशिका मानिस हुनेछन् मालामाल !